Prof. Jawaari oo Rome la kulmay dhigiisa Taliyaaniga – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
15th April 2014 A warsame Af Soomaali 0
Rome – Mareeg.com: Gudoomiyaha Golaha Shacabka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari oo wafdi uu hogaaminayo ay booqasho rasmi ah ku joogaan dalka Talyaaniga ayaa kulammo kala duwan kulla qaatay magaalada Rome mas’uuliyiin ka tirsan Dowladda Talyaaniga.
Shalay ooi isniin ah ayaa gudoomiyaha Baarlamaanka iyo Wafdigiisa waxa ay booqdeen xarunta Wasaaradda Arrimaha Dibadda dalkan Talyaaniga halkaasi oo si maamuus leh loogu soo dhaweeyey waxaana uu kula kulmay Wasiir ku xigeenka Wasaaradda Arrimaha Dibadda Talyaaniga Mario Giro oo isagu u faah faahiyey qorshayaasha ay Dowladda Talyaaniga ku dooneyso iney ku taageerto Dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed.
Gudoomiyaha Baarlamaanka dalkan Talyaaniga Mss Laura Boldirini oo kulanka markii uu soo gebageboobay kadib la hadashay saxaafadda ayaa tilmaantay in waxyaabaha ay ka wada hadleen ay ugu muhiimsaneyd iskaashi iyo wadashaqeyn joogta ah oo dhexmarta Baarlamaannada Soomaaliya iyo Talyaaniga waxaana ay aad u ammaantay qaabka uu xiligan u shaqeeyo Golaha Shacabka Soomaaliya, sidoo kalena waxa ay xustay iney Muqdisho ku imaan doonto casuumad ay ka heshay dhigeeda.
Gudoomiyaha Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari oo isna dhankiisa ka hadlay kulanka kadib ayaa xusay inuu dhowaan si rasmi ah u bilaaban doono iskaashi iyo wadashaqeyn dhexmarta labada Baarlamaan ayadoo wufuud ka kala socota labada Baarlamaan ee Soomaaliya iyo Talyaaniga iyo Talyaaniga ay socdaal ku kala tagi doonaan magaalooyinka Muqdisho iyo Rome.
Maanta ayaa gudoomiyaha Golaha Shacabka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iy wafdigiisa waxa ay socdaal ku tagi doonaan magaalada Napoli oo ah magaalo taariikhi ah halkaasina waxa uu kulasoo kulmi doonaa madax ka tirsan Dowladda Talyaaniga.
Gudoomiye cusub oo la wareegay maamulka degmada Xamarweyne